Apple wuxuu sii daayaa Beta Labaad ee macOS 12.2 loogu talagalay Soo-saareyaasha | Waxaan ka socdaa mac
Apple wuxuu sii daayaa beta labaad ee macOS 12.2 loogu talagalay horumariyeyaasha
Soosaarayaasha abka u dhisaya Apple waxay horey u haysteen nooc cusub oo macOS Monterey si ay isugu dayaan. Waxay ku saabsan tahay beta labaad ee macOS 12.2, kaas oo ay shirkaddu hadda u soo saartay dhammaan barnaamijyada raba.
Sida had iyo jeer dhacda dhammaan noocyada beta ee macOS, soo-saareyaasha Apple idman waxay si toos ah uga soo dejisan karaan websaydhka horumariyaha Apple ama OTA haddii ay hore u haystaan ​​nooca beta ee macOS Monterey oo lagu rakibay Mac-gooda. Dhammaan isticmaaleyaasha kale, waa in aan sug
Saddex toddobaad ka hor Apple ayaa sii deysay beta-gii ugu horreeyay ee macOS 12.2 oo saacado yar ka hor ay sii deysay beta labaad. Noocan ah macOS Monterey wuxuu ku darayaa abka muusiga cusub iyo hagaajinta Safari ee bandhigyada ProMotion sida MacBook Pro.
Beta-kan cusub waxa uu leeyahay tirada dhis 21D5039d. Hadda waa lagala soo degi karaa bogga internetka ka Apple ee horumarinta. Waxa kale oo lagu soo dejisan karaa iyada oo loo marayo OTA, haddii horumariyaha Mac uu hore u haystay beta macOS Monterey.
Horeba beta ugu horeysay ee macOS 12.2 qaar ka mid ah astaamo cusub ayaa la arki karaa. Waxay ku daraysaa codsi cusub oo u dhashay Apple Music, ka dhakhso badan oo ka fudud noocii hore, kaas oo u ekaa bogga internetka.
Waxa kale oo cusub oo aan ku arki karno macOS 12.2 beta 1 waa horumar la taaban karo oo ku saabsan duubista shaashadda ee Safari oo leh shaashado Dardar gelinta, sida MacBook Pro.
Waxa ugu macquulsan ayaa ah in beta-da labaad ee cusub ay si fudud u saxdo khaladaadka laga helay markii hore, oo aanay siinin wax war ah oo muhiim ah isticmaalaha.
Sida aan had iyo jeer ka samayno halkan, waxaan ku talinaynaa in ha ku rakibin nooc kasta oo beta ah ee macOS ee Mac-gaaga, haddii aad u isticmaasho shaqada ama dugsiga. Soo-saarayaashu waxay leeyihiin Mac-yo gaar ah oo ay ku sameeyaan imtixaannadaas, kuwaas oo aan ku jirin xog muhiim ah. Haddii ay sabab u tahay qaar ka mid ah khaladaadka beta-ka qalabku uu shil galo, way soo celiyaan oo dib ayay u bilaabaan, dhib la'aan. Waa khataro shaqo. Haddii ay taasi ku dhacdo kaaga, haa dhibaato ayaad la kulmi doontaa...
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Monterey » Apple wuxuu sii daayaa beta labaad ee macOS 12.2 loogu talagalay horumariyeyaasha